अनिल तिवारी, वीरगन्ज,भदौ ३ -
काठमाडौं, भदौ ४ -
काठमाडौं, भदौ ४ - दुई सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को व्यावसायिक लाभलाई लिएर गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले 'अस्वाभाविक' अडान राख्दा सिंगो संगठनको साउन महिनाको तलब रोकिएको छ। ३६ हजार फौज रहेको संगठनका जवान तथा जुनियर अधिकृतहरू यतिबेला तराईका बाढी प्रभावित क्षेत्रम...
जनकपुर, भदौ ४ - जनकपुरसहित समग्र तराई मधेसको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएको नेपालको एकमात्रै रेलसेवा आगामी फागुनदेखि संचालनमा आउने भएको छ । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ। भारतको जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै महोत्तरीको विजलापुरासम्म रेलमार्ग पुनर्निर्माण अन्...
काठमाडौं, भदौ ४ - निर्वाचन आयोगले एक महिनामा करिब १२ लाख मतदाता थपिएको जनाएको छ। स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आयोगले १ साउनबाट एक महिनासम्म देशैभर मतदाता नामावली संकलन थालेको थियो। यसअघि एक करोड ४० लाख मतदाता थिए। नयाँ मतदातासहित देशभर मतदाताको संख...
सरकारले सातै प्रदेशमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)लाई खटाउने भएको छ। प्रहरीलाई संघीय संरचनामा रूपान्तरणको गृहकार्यस्वरूप प्रहरी नियमावली संशोधन गरी एआइजीलाई कानुनी अधिकार दिएर प्रदेशमा पठाउन लागिएको हो। दुई साताअघि बढुवा भएका एआइजीहरूलाई अहिले...
काठमाडौं, भदौ ४ - कारोबार मूल्य तोक्ने विषयमा भन्सार कर्मचारी र व्यापारीबीच असमझदारी हुँदा पाँच सयभन्दा बढी मालबाहक कण्टेनर रसुवागढी नाकामा अलपत्र परेका छन्। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ। दशैंका लागि लक्षित गरी व्यापारीले ल्याएका सामानहरू नाकामै अलपत...
काठमाडौं, भदौ ४ - lsquo;दुर्गममा सेवा-सुविधा मिल्दैन' नेपाल सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) का अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डे सरकारी चिकित्सकको पारि श्रमिक ज्यादै न्यून भएको र कष्ट मोलेर दुर्गममा जाँदा पनि सेवा-सुविधामा वृद्धि नहुँदा यस्तो समस्या आएको बताउँछन्। ‘सरका...
काठमाडौं, भदौ ४ - मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटलको ‘पत्थरी निकाल्ने क्रममा मिर्गौला झिकेको घटनामा’मा तीन कमजोरी फेला परेका छन्। घटनाबारे बिरामी र अस्पताल पक्षबाट परेको उजुरीपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले अनुस...
काठमाडौं, भदौ ४ - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डुबान समस्याबारे भारतसँग कुरा नगरेकामा शीर्ष नेतृत्वसँग असन्तुष्टि पोखेकी छन्। सीमा क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेका बाँध/तटबन्धका कारण तराई/मधेसका भूभाग डुबानमा पर्दा जनताले दुःख-कष्ट भोग्न बाध्य भएकै बेला राष्ट्रपति भण...
बाँके, भदौ ४ -
साउन २७ को बाढीले घर भत्किएपछि च्यापिएर कविराज थारुका तीन छोरीको मृत्यु भयो। तर ७ दिन वितिसक्दा पनि उनले मृतक छोरीको अन्तिम संस्कार गरेनन्। छोरीसहित घरको कुलदेउता पनि घरमै पुरिएपछि उनले अन्तिम संस्कार गर्न नपाएका हुन्।
बनेपा, भदौ ४ - सुत्केरीपछिको अधिक रक्तस्रावबाट हुने मातृ मृत्युदर कम गराउन फुटबल वा भलिबलको प्रयोग गरिन थालेको छ । यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ। सुन्दै अनौठो लागे पनि यी खेल सामाग्रीको प्रयोगले सुत्केरीपछिको रक्तस्राव कम गराउंदै रेफरल अस्पतालसम्म विर...
काठमाडौं, भदौ ४ - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोसी बाँधको सञ्चालन र नियन्त्रणको जिम्मा भारतलाई दिइएकोमा गम्भीर असन्तुष्टि जनाएकी छिन् । उनले स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सम्झौता पुनरावलोकनका लागि पहल गर्न प्रमुख दलका शीर्ष नेत...
दाहालले भने- 'एमालेलाई सिध्याउन कांग्रेससँग सहकार्य'
काठमाडौं, भदौ ३ -
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमालेको संगठन 'ध्वस्त पार्न' सरकारदेखि विभिन्न निर्वाचनमा कांग्रेससँग सहकार्य गरेको खुलासा गरेका छन्।एमालेले उठाएको राष्ट्रवादको नाराभित्र अहंकार लुकेको दाबी गर्दै दाहालले त्यसलाई नतोडे माओवादी आन्दोलन र पार्टीकै भविष्य जोखिममा पर्ने बताए। एमालेको धारलाई भुत्ते पार्दै लैजाने र अन्ततः त्यसभित्रको एउटा धारलाई माओवादीकै छातामुनि ल्याउने कार्यनीतिअन्तर्गत कांग्रेससँग सहकार्य गरेको उनले बताए। यो खबर रामकृष्ण अधिकारीले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
सरकारले बाढीपीडितलाई प्रतिव्यक्ति दैनिक ७० रुपैयाँ दिने
सरकारले बाढीपीडितलाई प्रत्यक्ष राहतस्वरूप दैनिक ७० रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषले बाढी प्रभावितलाई प्रतिव्यक्ति ७० रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो। सो निर्णयलाई पछिल्लोपटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएको हो। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
सानुमाया राई, धरान, भदौ ३ -
बर्खाको बाढीमा चार घन्टा लगातार बगेर पनि जीवित रहनु असम्भव नै हो। बाढीले झन्डै १० किलोमिटर टाढासम्म बगाउँदा साहस र संयोगले साथ दियो, त्यसैले बाँचिन् सानुमाया राई। तर, त्यही घटना उनका दिदी–भिनाजुका लागि दुर्भाग्य बन्यो। दिदीको शव भेटिएको छ भने भिनाजु अझै बेपत्ता छन्।
थप ११ हवाई साधन भित्र्याउदै सेना
नेपाली सेनाले ११ वटा हवाइ साधन थप्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आफैंले किन्न लागेको ६ हेलिकप्टर र एउटा जहाज तथा अमेरिकी अनुदानमा प्राप्त हुने ४ स्काई ट्रक आगामी डेढ बर्ष भित्र सेनाले भित्राउने भएको हो। हाल सेनासँग १० हवाइ साधन चालू अवस्थामा छन् भने १५ वटा चल्न सक्ने हालतमा छैनन्। यो खबर चन्द्रशेखर अधिकारीले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।
आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरण : बोलपत्रमै मिलेमतो गरी अनियमितता
काठमाडौं. भदौ ३ -
नेपाल आयल निगमले जग्गा खरिदको बोलपत्र निकाल्दा ३ जग्गाधनीले बोलपत्र पेश गरे। त्यसमध्ये २ जनाको बोलपत्र मात्रै स्विकृत भयो। न्यूनतम दररेट प्रस्तुत गर्नेले प्रतिकट्ठा १३ लाख ५१ हजार रुपैंया प्रस्ताव गरेको थियो भने अर्कोले १६ लाख ३० हजार रुपैंया। मिलेमतोमा पेश गरिएको बोलपत्रलाई स्विकृत गरी २३ विगाहा ३ कट्ठा १३ धुर जग्गा झापामा खरिद भयो। यो खबर कृष्ण ज्ञवाली/राजु चौधरीले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।
गाउँमा अझै मुखियाको शासन यसरी चल्छ
मुस्ताङ, भदौ ३ - मुस्ताङ जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा २४ वर्षीया छिरिङ ल्हामो निर्वाचित भइन्। सदरमुकाम जोमसोम रहेको घरपझोङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा आसबहादुर थकाली निर्वाचित भए। स्थानीय तह निर्वाचन सकिएको तीन महिनापछि साउन अन्तिम साता मुखियाको निर्वाचनसमेत भयो। जोमसोम...
'नेटवर्क मार्केटिङ' ब्युँताउने प्रयास
सात वर्षअघि प्रतिबन्ध लगाइएको 'नेटवर्क मार्केटिङ' लाई घुमाउरो बाटोबाट ब्युँताउने प्रयासमा सरकार आफैं लागेको छ। वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री-व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक, २०७४ संसद्मा पेस गरेपछि सरकारी प्रयास सतहमा आएको हो। यो खबर श्रीधर खनालले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागको लाचारीले ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को व्यवस्था लागू हुन सकेन
वैदेशिक रोजगारीमा खाडी तथा मलेसिया जाने कामदारका लागि सरकारले लागू गरेको ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ नीति कार्यान्वयन असफल देखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी पाएको निकाय वैदेशिक रोजगार विभागकै लाचारीले फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्था लागू हुन नसकेको हो। यो खबर गोपाल साउदले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
काठमाडौं, भदौ २ -
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु १३ अर्ब ८ करोड ३९ लाख ३३ हजार पुगेको छ। त्रिविमा पञ्चायतकालदेखिको बजेट फस्र्योट नहुँदा आर्थिक वर्ष ०७३-७४ सम्ममा १३ अर्बभन्दा बढी बेरुजु देखिएको हो। यो खबर भवानीश्वर गौतमले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
काठमाडौं, भदौ २ - गत साउन २८ गचते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मुलुकको लाईफ लाईन सडकका रुपमा रहेको नारायणगढ मुग्लिन सडकखण्डको अनुगमनमा निस्के। उनले उक्त खण्डको २० किलोमिटर सडकको अवलोन गरेपछि आयोजना प्रमुख तथा ठेकेदारलाई निर्देशन दिए, तपाईँहरुले यो सडकमा कुनै खा...
प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषले बाढी प्रभावितका लागि वितरण गर्न गृह मन्त्रालयलाई एक अर्ब रुपैयाँ निकासा दिने निर्णय गरेको छ। कोष सञ्चालक समितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले पहिलो किस्तामा ५० करोड र दोस्रो किस्तामा ५० करोड गरी एक अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। तर, सो रकम बिहीबारसम्म गृह मन्त्रालयमा पुगेको छैन। यो खबर सागर, अजितले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
नेपाल वायुसेवा निगमले २६ सेप्टेम्बर २०१६ मा दुईवटा वाइड बडी जहाज (३३०-२२०) खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्‍यो, तर सेकेन्ड ह्यान्ड। निगमले बढीमा एक हजार घन्टा उडान गरेको, जनवरी २०१४ भन्दा पुरानो हुन नहुने, अधिकतम ‘टेक अफ वेट' (उड्ने बेला हुने तौल) दुई लाख ४२ हजार किलो हुनपर्ने सर्त राखेको थियो। बोलपत्रमा सहभागी कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय स्टक मार्केटमा सूचीकृत हुनुपर्ने, विमानको स्वामित्व प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी कम्पनीकै हुनुपर्ने सर्त थियो। विमान डेलिभरीको समय सेप्टेम्बर २०१७ र मार्च २०१८ भनिएको थियो।
काठमाडौँ, भदौ २ -
भारतमा प्रतिबन्धित भारतीय मुद्रा एक हजार र पाँच सयका नोट पशुपतिनाथलाई चढाइने गरिएको छ । भारतीय तीर्थयात्रीले ती दरका रुपियाँ नाथलाई भेटीका रूपमा चढाउने गरेका छन् । यो खबर सरोज आचार्यले आजको गोरखापत्रमा लेखेका छन्।
मन्त्री फेरिएसँगै कर्मचारीको छिटो–छिटो सरुवाको ‘रोग’ गृह मन्त्रालयमा सल्किएको छ। यसले गर्दा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको नीतिगत निर्णय र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन अलपत्र पर्ने गरेको छ। गृह मन्त्रालयले गरेको सरुवासम्बन्धी पछिल्ला निर्णय हेर्दा भन्न करै लाग्छ, कतिखेर के आधारमा कुन कर्मचारीको सरुवा हुने, कुनै टुंगो छैन। यो खबर आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ।
चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ नेपाल भ्रमण पूरा गरी बिहीबार फर्केका छन्। यो पछिल्लो ६ वर्षमा चीनबाट नेपालमा भएको उच्चस्तरीय भ्रमण हो। तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले सन् २०१२ जनवरीमा संक्षिप्त भ्रमण गरेयता उच्च तहको भ्रमण हुन सकेको थिएन। चीनबाट भएको उच्च तहको भ्रमणलाई सरकारले महत्व दिए पनि तत्काल हेर्दा नेपाललाई उपलब्धि भने शून्यप्रायः देखिएको छ। यो खबर सन्तोष घिमिरेले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
काठमाडौं, भदौ २ - सांसदहरूले भ्रष्टाचार र नैतिक आचरणमा कारबाहीमा परेका व्यक्तिले तीन वर्षमै निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोगलगायत अभियोगमा कारबाहीमा परेका व्यक्तिले ६ वर्षसम्म निर्वाचन...